Imbali yeMbali yokulila kunye neenkqubo eziqhelekileyo - Malunga Iindawo Zokuhlala Ne Memorials
Imbali yeMbali yokulila kunye neenkqubo eziqhelekileyo
Imvelaphi yebhanti yokulila ayicacanga kwaye ibonakala amaxesha ambalwa kwimbali. Amabhanti amnyama ezililo asetyenziswa kwiinkcubeko ezininzi, kwimisebenzi, nakwiinkonzo ukukhumbula umfi.
AmaXwebhu embali oSetyenziso oluMnyama lokuLila
Enye yeembonakalo zokuqala zebhanti emnyama yokulila yabhalwa kumfanekiso we-1614 ka-Queen of Bohemia. Kucingelwa ukuba uKumkanikazi uElizabeth Stuart wayenxibe isimbonono sokuzila ukuhlonipha umntakwabo ongasekhoyo, iNkosana yase Wales, uHenry Frederick.
Kutheni abantu banxibe ezimnyama ukuya emingcwabeni? Emva kwesiko
Izithethe ezili-9 zakudala zase-Italiya zokuNgcwaba
Amasiko okuBhubha amaBuddha
Imbali yase-UK ityhila ukusetyenziswa kweQela eliMnyama lokuzila
Iindleko ze iimpahla zokuzila yayibiza kakhulu kwaye kumakhaya afumileyo, izicaka zazinikwa iseti yeempahla ezimnyama zokuzila. Kweminye imizi, izicaka zanikwa ii-armband zelaphu elimnyama.
bangaphi abantwana abamkelwa unyaka nonyaka
Ukusetyenziswa kweBhendi yokulila ngexesha lokuNgxamiseka kunye namaXesha amaVictoria
Ibhendi emnyama yokulila yayiqaqambile ngexesha leRegency kwayeAmaxesha ama-Victorian. Imilinganiselo yokuziphatha kwimpahla yokulila yaba yinto eqhelekileyo yefashoni ngala maxesha.
Abakhonzi basebukhosini banxiba iiArmbands ezimnyama zokuzila
Umyeni ka-Queen Victoria, u-Prince Albert, wasweleka ngo-1861. Isikhokelo sombhali kubomi bemihla ngemihla kwiRegency kunye ne-Victorian eNgilane ukusuka nge-1811-1901 , UKristine Hughes Ubhala kwiphepha lama-216, 'Ubuncinane kangangeminyaka esibhozo emva kokubhubha kweNkosana u-Albert, abakhonzi basebukhosini baqhubeka nokunxiba ii-armpand ezimnyama kwimiyalelo ka-Queen Victoria.
Amanqaku aMnyama aMnyama aMnyama aMkelwe ngabasebenzi kunye noMkhosi
Iindaba zeVintage ithi, 'Ngokubanzi, abakhonzi babenxiba ii-armbands ezimnyama xa kwakubhubhe endlwini.' Uninzi loluntu oluthathwa njengeengubo ezimnyama ezimnyama zazifanele amadoda kumkhosi okanye kolunye uqeqesho apho kwakufuneka iyunifomu. Ngaphandle kwala maqela abantu, bekuthathwa njengokuziphatha okungafanelekanga ngokunganxibi iimpahla zokuzila.
Amanqanaba okulila kwiNkcubeko yaseTshayina
E-China, umhlophe ngumbala womngcwabo endaweni yomnyama okoko umnyama uthathwa njengombala oqinisekileyo. Ngo-1908, xa uKumkanikazi uTzu Hsi wasweleka, Amajoni amaTshayina babenxibe imitya emikhulu yokulila ezimhlophe kwizandla zabo zasekhohlo.
Iimpawu ezimnyama zokuzila kwiNkcubeko yaseNtshona
Ngaphandle kwexesha lama-Victorian, ukuziqhelanisa nokunxiba i-armband emnyama ukubonisa oyinxibileyo kwakulusizi kukhula ekuthandeni e-United States. Kwakungabizi kakhulu ukuthenga i-armband emnyama kunayo yonke ikhabethe yeempahla ezimnyama zokuzila.
Umgaqo wokuzila kunye nokudakumba okukhulu
Olu tshintsho lwangeniswa ludandatheko olukhulu phakathi kowe-1929 nowe-1933. Ngenxa yobuhlwempu obugqithisileyo, abantu babengenakukwazi ukubhatala iindleko zokuziphatha ezilusizi zamaVictoria, ezinje ngonyaka wokuzila. Akumangalisi ukuba, iqela elimnyama lokulila lamkelwa njengembonakalo esemgangathweni yomntu olilayo, ngakumbi amadoda.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kweeArmbands zokuzila eziMnyama
Emva kohlaselo kunye nokuqhushumba kwePearl Harbour ngamaJapan ngoDisemba 7, 1941, uMongameli uFranklin D Roosevelt wafotwa esayina isibhengezo semfazwe neJapan. Kwingalo yakhe yasekhohlo, wayenxibe ibhande elimnyama lokuzila. Nangona kunjalo, ibhendi ayinanto yakwenza nokuhlaselwa kweMelika. UMongameli Roosevelt wayesentlungwini yokuswelekelwa ngunina.
yeyiphi iwayini eneekhalori ezincinci
Iimpawu eziMnyama zokuzila kwiMidlalo
Isiko leebhanti ezimnyama zokuzila liyabonwa kwimidlalo emininzi. Umzekelo, imidlalo yebhola ekhatywayo yaseYurophu (yebhola ekhatywayo) inxiba ii-armbands ezimnyama ngalo lonke ixesha kusweleke ilungu leqela. Abadlali beqela banike iqela elimnyama kumdlalo wokuqala odlalwe emva kokubhubha kwelungu leqela. Ibhendi emnyama yokulila ngokwesiko inxitywe engalweni yasekunene , ke ayingqubani naleyo inxitywe ngukapteni weqela kwingalo yakhe yasekhohlo. Ibhanti elimnyama elililayo linxitywa xa umqeqeshi, owayesakuba ngumqeqeshi, okanye owayekade edlula.
Ukunyanzeliswa komthetho kunye neebhendi zokuzila
Ukufaka umthatho ukuziqhelanisa nokunxiba kweebhendi ezimnyama zokuzila xa elinye igosa liswelekile. Ibhendi inxityiwe ngenxa yoko igubungela isiqingatha seebheji zamagosa. Ibhendi ihlala inxitywa kangangeentsuku ezingama-30 emva kwe ukufa kwegosa . Amanye amagosa anxiba kuphela ibhanti yokulila ukuya kumngcwabo wegosa. Inye kuphela ibheji yomfundisi ukuba inophawu lwenkolo kuyo, njengomnqamlezo, iNkwenkwezi kaDavide, okanye olunye uphawu ibhendi ayinxitywanga.
Izimbo zokuzila ziMigangatho yokulila
Elinye igama elisetyenziselwa amaqela okulila kukuzila. Ngokungafaniyo namakhonkco amnyama, oku kusisiqwenga seteyipu emnyama okanye ilaphu. Ibhendi ibekwe ngokuthe tye ngaphezulu embindini webheji.
Umgca oBlue Blue
Ukhetho oludumileyo lweebhendi zokuzila yi ibhanti emgceni eluhlaza okwesibhakabhaka yeyona ndawo ibheji. Eli qela limnyama kunye nomgca ocekeceke oluhlaza okwesibhakabhaka ohamba embindini webhendi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana imbuyekezo yerhafu ehlaziyiweyo emva ko-2017
Iimpawu zaMnyama eziMnyama zokuLila
Ngaphezulu kweminyaka engamakhulu amane yesiko ime ngasemva kwebhendi emnyama njengomqondiso wokulila. Enoba ngumtya omnyama phezu kwebheji okanye i-armband emnyama, ngumqondiso wentlungu eyaziwayo ngokukhawuleza.
Iinkonzo Zematriki Citizen Igadi Pests Ukuhlala Ixesha Elide Ikhaya Izixhobo Abantu Abadumileyo
Malunga Social Networking
Ihamba njani inqanawa yokuhamba ngenqanawa
usathandana neex quiz yakhe
Kuthatha ixesha elingakanani ukuzalwa kwamantshontsho
ukuba uzothini xa wohlukana nomntu omthandayo
indlela yokwenza tattoo iphele
ithini ibhayibhile ngeeringi zomtshato